टिभी नहेर्नेभन्दा हेर्ने बालबालिकाको पढाइ राम्रो !
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्य स्वास्थ्य जीवनशैलीटिभी नहेर्नेभन्दा हेर्ने बालबालिकाको पढाइ राम्रो !
विराटनगर, १९ पुस । अधिकांश अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई पढाइमा बाधा पुग्ने सोचले घरमा टेलिभिजन हेर्न दिँदैनन् । लामो समयसम्म नपढेर टेलिभिजन हेर्दा बालबालिकाको पढाइमा असर पर्नु स्वाभाविक हो । तर, विद्यालय र घरमा नियमित तालिकाअनुसार अध्ययन गर्ने र बाँकी समय टेलिभिजन हेर्ने बालबालिकाहरूको पढाइ राम्रो रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
ईआरओ अर्थात् शैक्षिक गुणस्तर विकास केन्द्रले गरेको कक्षा ८ मा अध्ययनरत २८ जिल्लाका ११ सय ९९ विद्यालयका ४४ हजार ६७ विद्यार्थीमा गरेको अध्ययनमा निश्चित समय टिभी हेर्ने बालबालिकाको पढाइ टिभी नहेर्नेकोभन्दा राम्रो हुने उल्लेख गरेको छ । ईआरओले हालै गरेको अध्ययनमा दैनिक २ घन्टासम्म टिभी हेर्ने बालबालिकाको मस्तिष्कमा सकारात्मक सोचको विकास भइ अध्ययनमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
निश्चित समय टिभी, रेडियो, मोबाइल, कम्प्युटरलगायतमा समय बिताउने बालबालिकाको सोच सकारात्मक हुने भएकाले सिकाइ पनि राम्रो हुने केन्द्रका सहसचिव डा. लेखनाथ पौडेलले बताए । सामान्य घरायसी सामग्रीजस्तै मोबाइल, कम्प्युटर, टिभी र रेडियोको सहज उपलब्धताले पनि बालबालिकाको सिकाइमा सकारात्मक असर पुर्‍याएको देखिन्छ । यस्ता घरायसी सामानको संख्या थोरै वा नभए सिकाइ उपलब्धि कम हुने गरेको पाइएको छ ।
विद्यार्थीलाई अध्ययनमा सहयोग पुग्ने छुट्टै कोठा र अध्ययनका लागि आवश्यक साधन तथा सन्दर्भ सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्यार्थीले अध्ययन गरेको विद्यालयको प्रकार, आमाबुबाको शैक्षिक अवस्था तथा अंगालेको पेशा, घरमा उपलब्ध पढाइका लागि सहयोग पुग्ने सामग्री र घरमा भएका ग्याजेटहरूले विद्यार्थीमा पढ्ने अभिरुची जनाउने अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको हो ।